Usebenzisa ubuchwepheshe nezolimo ukuvulela abalimi iminyango ofike kwezwakala kule mboni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Nokho kwacaca ukuthi inkonyane ithuka isisinga futhi kwamlimaza nokugagamelela imboni angayazi. Akahlalanga wazikhotha amanxeba isikhathi eside, kunaloko ufunde emaphutheni awenzile wase eshintsha izinto laqala lachuma ibhizinisi.
UMnu uZamokuhle Thwala, yisikhulu esiphezulu se-Agrikool, inkampani esiza abalimi bathole amakhasimende abazowadayisela imikhiqizo yabo. Uyisungule eminyakeni emithathu edlule.
“Ngithe uma sengenza unyaka wokugcina (enyuvesi) ngabona ithuba lokuqala i-Agrikool eyayisiza abalimi ngemali ngoba ngaleso sikhathi sasingabasizi ngokuthi badayise umkhiqizo wabo.
“Kuthe kusenjalo kwaba nezinkinga, kwafika iCOVID-19, kwadingeka (ukuthi) sishintshe singabe sisabolekisa ngemali kodwa sibasize bakwazi ukudayisa umkhiqizo wabo. Lowo mcabango wawuqhamuke ekutheni phambilini nami ngike ngaba wumlimi osafufusa, ngazibona lezi zinkinga abalimi ababanazo zokungakwazi ukudayisa umkhiqizo wabo nokungabi nemali. Ngiqala i-Agrikool ngangifisa ukuxazulula lezo zinkinga.”
Inkaba kaThwala iseMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natali, kodwa ukhulele eNanda, eThekwini. Uwunjiniyela ogxile kwezolimo njengoba ene-Honours in Agricultural Engineering yase-University of KwaZulu-Natal.
Uthi baguqule indlela abaqala ngayo ngoba ziningi izingqinamba ababhekana nazo njengoba babengazi lutho ngemboni yokubolekisa ngemali, nokwaholela ekutheni abantu abaningi bangakhokhi. Kunezinye izinto ezabenza bashintsha. Mlalele echaza.
I-Agrikool, ezinze eMgungundlovu, isebenzisana nabalimi abasafufusa nabakhulu abawu-200. Ithola i-commission ngokusiza abalimi bakwazi ukudayisa imikhiqizo yabo ezitolo zokudla ezinkulu ezinjengoShoprite, oBoxer noFood Lovers’ Market esifundazweni sonke futhi ilekelela abadayisi basemgwaqweni bamaveji.
Le nkampani iqashe abantu abawu-11 kanti ingenisa izigidi ngonyaka.
UThwala uthe iNingizimu Afrika iyabadinga osomabhizinisi ngoba loko kuyasiza ukuvula namathuba emisebenzi. Nokho ugcizelele ukuthi kumqoka ukuthi abantu bangene emabhizinisini abawathandayo ukuze bezokwazi ukubona amathuba nokumelana nezinselelo ezibakhona.
“Uma inkampani encane njenge-Agrikool ikwazi ukuqasha abantu abawu-10, cabanga ukuthi uma kungakhona ezinye eziwu-1 000; kusho ukuthi kungaba namathuba omsebenzi awu-10 000.
“Imali iyadingeka kodwa enye into esengiyifundile ngamabhizinisi wukuthi akusiko nje ukudayiselana kodwa wukwakha ubudlelwano nabantu okumqoka ngoba uma ubheka zonke lezi zinkampani ezinkulu esesisebenza nazo yingoba sinobudlelwano nazo. Uma usaqala, yakha ubudlelwano, imali izolandela. Yenza abantu bakuthembe, ukwenze othe uzokwenza ngesikhathi. Kumqoka nokwakha ithimba elifanele ozosebenzisana nalo ngisho ngabe kuthiwa kufanele uqashe izikhawu eziwu-10 ukugcwalisa isikhala esisodwa, yenza njalo, uze umthole umuntu ofanele.”
UThwala uthe kumqoka ukuthi abalimi abasafufusa babenezindlela ezicacile okwenziwa ngazo umsebenzi ngoba impumelelo yanoma yiliphi ibhizinisi ilele lapho. Uthe ukungabi nendlela ecacile yikona okuvimba abalimi abasafufusa ukuthi bakhule. Muzwe echaza.
UThwala uthi kumele kube nendlela yokukhuthaza intsha ukuth ingene kwezolimo ngoba akulula ukuthi ivele ivumele phezulu ukuzobhekana nobungozi obukhona embonini.
Wengeze ngokuthi uhulumeni akayeke ukufika esephethe akholwa wukuthi yizinto abalimi nosomabhizinisi bale mboni abazidingayo engababuzile. Uthi uhulumeni ungafaka isandla ekutheni imikhiqizio idayiswe ngokuqinisekisa ukuthi ukudla kwasezikoleni, ezibhedlela nasemajele kuthengwa kubalimi abamnyama.